Bright biography Eduarda Hilya
"UMnu Trololo" - ngaphansi kwaleli gama eyaziwa kule minyaka yamuva, Eduard Khil, ogama biography uzonikezwa ngezansi. Ngo-1974 yena yanikezelwa isihloko Umculi Yabantu we RSFSR ke omunye. Futhi nakuba namuhla lo muntu abanamakhono futhi solar ayisekho nathi, izingoma zakhe siqhubeke zikhulisa izinhliziyo zabantu.
Biography Eduarda Hilya. ebuntwaneni
Njengoba umculi ngokwakhe wathi, ngonyaka lokuzalwa kwakhe kwaba 1933 (Smolensk idolobha), kodwa ngesikhathi imibhalo neMpi Yezwe II ke ilahlekile, futhi entsha wenza iphutha ngokufaka 1934 lokuzalwa. Ubaba Edward, Anatoly, ubesebenza njengomshayeli umakhenikha nonina Elena - ezimali. Nokho, ngisho nangaphambi kokuba impi, bahlukanisa. Ngokushesha umndeni kwakukhona indoda eyodwa - Edward usingababa.
Gil ebuntwaneni kule minyaka enzima yempi. Lo mfana-ke bashiya amakhaya abo, futhi ngaleso sikhathi wayesesangweni ekhaya lezingane, etholakala edolobhaneni Ufa Raevka. Eduardo bekubudisi khona. Izikhathi eziningana ngesikhathi ezama ukubaleka eya phambili, kodwa ngaso sonke isikhathi ibuyisela emuva, ngoba Ngaleso sikhathi ngangineminyaka engu-9 kuphela ubudala.
Ngenhlanhla, umama wakhe nobaba babesinde, futhi ngemva yokukhululwa Smolensk, umndeni wahlangana. Nokho, u-Eduard Khil ngenxa yokungondleki kahle baqala ukuhlupheka konke iphethwe isifo sokuwohloka. Kodwa pretty ngokushesha walulama.
Biography Eduarda Hilya. intsha
Ngo-1949, Gil banquma ukubhalisela ekolishi waya ukuphrinta kule yiLeningrad. Yena ngempumelelo kudlule izivivinyo futhi owaba umfundi we ngonyaka 1st. Ngisho nangaleso sikhathi, le nsizwa yayinesithakazelo kakhulu art obubonakala ngendlela eziningi, futhi ngesikhathi esifanayo efundisa abantu ekolishi khona emakilasini angu ngesikhathi Opera Studio, ukuya esikoleni sakusihlwa umculo, wafunda umdwebo bese wayesebenzela offset endaweni yokukhanda.
Phakathi kwezinye izinto, Edward Gil lathweswa iziqu ngo-1960 kusukela Leningrad Conservatory, ngokushesha ngemva kwalokho waba soloist ka "Lenkontserta". Kanye ingoma yayinesithakazelo esebenza.
Biography Eduarda Hilya. Sokuthuthwa kwempahla umsebenzi
Eduardo Gil kwakukuhle ngisho ukuqala i-career. Wakwazi anqobe zonke ngezwi lakhe nabanekhono, ukudlala imidlalo ngemisebenzi Shostakovich, Schubert, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Auber, nabanye abaningi. Ekuqaleni kwawo-60 umculi sifisa baba owawina lo mkhosi "White Nights".
Talent Gil wayibona futhi wayazisa leonid Utesov ngokwakhe, wethula le nsizwa esiteji eMoscow Wezobuciko ngo-1962. Ngemva komunye iminyaka emithathu, umculi yaba ilungu eSoviet Iculo Festival.
Ekupheleni wahlanganyela zonke "ukukhanya blue" 60 U-Eduard Khil. Ngaphezu kwalokho, wabhala umlando, okuyinto ngacula inganekwane iculo. Esikhathini '70 kwafika akwazi ukugcina ezimbalwa giant, okuyinto eqoqwe izingoma best eyenziwa Eduarda Hilya. Kusukela ngaleso sikhathi, kuye kwaba esinye isivakashi wamukelekile kakhulu amakhonsathi ahlukahlukene.
Biography Eduarda Hilya. kweminyaka
Ngo-2010, ividiyo wabonakala ku-intanethi, lapho Gil lihlabelela ngengoma yokwenama. Le vidiyo eqoqwe izigidi ukubukwa, ukuze umlingisi waphinda zithandwe, hhayi kuphela ezweni lethu kodwa futhi phesheya, ikakhulukazi eBrithani. Kusukela 2010 kuya kowezi-2012 waze wanikela amakhonsathi eziningi, kuhlanganise amaqembu lapho abantu abancane beze.
Nokho, ngo-2012 yabe seyaziwa ukuthi Eduard Khil, iminyaka yakho yokuphila ezibe ayakhanya, ushone ngenxa yokushaywa unhlangothi.
Emi Uaynhaus (Izihlabane zase kosta Rika): Umlando kanye imbangela yokufa kwakhe
Abahlanganyeli bhá yephrojekthi "Izwi Izingane" - 2014:. Akselrod Lev, Alan Ershov nabanye.
Kwenza for engadini umhlobiso "isibungu" ngezandla zakhe kusukela amatshe nobumba
I "Owesifazane Nabantu" - uphawu ubunye bahlukene
Asiwona umdlalo wethelevishini "Ukuhlaba Ikhefu Ongunaphakade ': abadlali kudlalwa ngokusuka enhliziyweni
Yini okufanele ugqoke izicathulo ezibomvu ekuphileni kwansuku zonke
Yiluhlobo luni lwamaminerali olwenza ilanga le-bead cat?
NV Gogol "saseNevsky Prospect": isebenza ukuhlaziywa